GMMA-80A elu arụmọrụ akpaaka na-eje ije efere beveling igwe - China Shanghai Taole Machinery
GMMA-80A elu arụmọrụ akpaaka na-eje ije efere beveling igwe
GMMA efere ihu beveling-egwe ọka igwe na-enye elu arụmọrụ na precisious arụmọrụ na ịgbado ọkụ bevel & nkwonkwo nhazi. Na mbara na-arụ ọrụ dịgasị iche iche nke efere ọkpụrụkpụ 4-100mm, bevel angel 0-90 ogo, na ahaziri ígwè na-nhọrọ. Advatages nke ala na-eri, ala ụzụ na elu mma.
GMMA-80A akpaaka na-eje ije efere beveling igwe abụọ Motors
GMMA-80A akpaaka na-eje ije efere beveling igwe abụọ Motors. Wide-arụ ọrụ nso nke mwekota ọkpụrụkpụ 6-80mm, bevel angel 0-60 ogo kemeghi na max bevel na pụrụ iru 70mm. The ngwọta kasị mma na beveling &-egwe ọka usoro maka Weld nkwadebe.
Enwere 2 nhazi Way:
Model 2: Machine ga-aga tinyere onu nke nchara na zuru ọrụ nhazi nnukwu ígwè efere.
Model Mba GMMA-80A high efficiency auto working efere beveling igwe
Mkpokọta Ike 4800W
Speedgba ọsọ 750-1050r / min
ndepụta Speed 0-1500mm / min
mwekota ọkpụrụkpụ 6-80mm
mwekota Obosara > 80mm
usoro Ogologo > 300mm
Bevel angel 0-60 ogo mgbanwe
Single Bevel Obosara 15-20mm
Bevel Obosara 0-70mm
cutter efere 80mm
Worktable Elu 700-760mm
ibu Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ 245KGS GW 280KGS
Cheta na: Standard Machine tinyere 1pc cutter isi + 2 set of inserts + Tools bụrụ + Manual Operation
1. Maka metal efere Carbon ígwè, igwe anaghị agba nchara, aluminum etc
2. ike hazie "V", "Y", 0 ogo-egwe ọka, ịdị iche iche ụdị bevel nkwonkwo
3. igwe Type na High Previous nwere ike iru Ra 3.2-6.3 maka n'elu
4.Cold Cutting, ike ịzọpụta na Low Noise, More mma na gburugburu ebe obibi na Ol nchedo
5. Wide ọrụ nso na mwekota ọkpụrụkpụ 6-80mm na bevel angel 0-60 ogo mgbanwe
6. Easy Operation na elu arụmọrụ
7. More mụ arụmọrụ na 2 Motors
Previous: GMMA-30T igwe ihe igwe ihe eji eme akwa
Osote: GMMA-V2000 CNC igwe n'ihi efere beveling &-egwe ọka
akpaaka na-eje ije efere beveling igwe
elu arụmọrụ beveling igwe
Large efere Edge igwe Machine
metal ihu chamfering igwe
igwe Machine Kemeghi n'akuku efere
igwe Machine Base efere
igwe Machine eletrik efere
efere chamfering igwe
efere Edge Chamferin g Machine
Portable efere Edge igwe Machine
obere efere ihu igwe ihe
GMMA-60R abụọ n'akụkụ ihu igwe
GMMA-25a-U downhill beveling igwe
Steel efere bevel igwe Ụgha Prep